1 mu3 smartwatches inotengeswa ndeye Apple Watch | Ndinobva mac
1 mu3 smartwatches inotengeswa iApple Watch
Kubva kuvhurwa kweApple Watch, kambani iri muCupertino zvinoita sekudaro wave muenzaniso unofanirwa kuteverwa nevamwe vagadziri, uye neizvi handisi kutaura nezve kuteedzera mabasa kana dhizaini, asi kuti ndiite vashandisi vazive kuti smartwatch inopfuura kungoita mudziyo wekuona zviziviso zve smartphone.
Apple haina kumbobvira yapa kutengesa kweApple Watch, pamwe neAirPods, uye kwemwedzi mitatu, haina kupa data rekutengesa kune zvishandiso zve iPhone, iPad kana Mac chero. inomanikidza vaongorori kuti vashande zvishoma kuti vazivezvinenge nhamba dzekutengesa. Ivo vane hukama neApple Watch vanotiratidza kuti mugove wemusika weApple's smartwatch uri 35,8%.
Mune mamwe mazwi, 1 mu3 smartwatches akatengeswa mukota yekupedzisira yaive Apple Watch. Kana tikafananidza izvi zviyero nenguva yakafanana yegore rapfuura, tinoona kuti huwandu hwacho hwakaenzana (35,6%).
Panzvimbo yechipiri, tinowana Samsung, uyo akawana wedzera kutengesa kwako nenzvimbo yemusika kusvikira wawana chikamu che11.1%, kubva pa7.2% yayaive nayo panguva imwechete yegore rapfuura.
Panzvimbo yechitatu tinowana iyo Chinese kambani imoo, iyo yakadzikisa chikamu chayo chemusika ne3%. Panzvimbo yechina, tinoona sei Fitbit iri kupora zvishoma nezvishoma pasi iyo yakarasikirwa makore akati wandei apfuura apo smartwatches yakatanga kutengesa manhamba ewristband uye parizvino ine 5,5% chikamu chemusika.
Panzvimbo yechitanhatu neyechinomwe, tinowana Amazfit (Xiaomi), uyo adzikisa mugove wake kubva pa4,6% mukota yekutanga yegore ra2018 kusvika pa3,7% mukota yekupedzisira. Tevere, tinowana Huawei ndiani abva pakungo kuve neichi chikamu muchikamu ichi kuva ne2% mugove.
Vhara iyo Fossil kupatsanura, iyo yakadonha 7 chegumi kubva pa3.2% kusvika pa2,5% uye Garmin.
Vamwe vese vagadziri, vamwe vese uye vashoma vanozivikanwa mhando, vanogovana quota ye27,9%, chikamu chakaderedzwawo kubva pa30,8% yayaive nayo gore rapfuura pamadheti mamwe chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » 1 mu3 smartwatches inotengeswa iApple Watch
Izvi ndizvo zvinogona kuratidzika seOvercast pane MacOS nekutenda kuMarzipan
Iyo Mac App Store ine matambudziko kune vamwe vashandisi